China indasitiri yekubata pc pc Manufacures nevatengi - Shenzhen VisionVision Technology Co LTD
Imba >Zvigadzirwa >Industrial inobata pani pc
Shenzhen ThinkView Technology Co, Ltd yakagadzwa muna2008, inotarisa mukugadzira nekugadzira zvigadzirwa zvemakomputa senge Zvese mune imwe PC, Bata AIO PC, Gaming Monitor, Kubata Monitor, Kubhejera AIO uye mini bhokisi PC. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana, semuenzaniso mu-i-cafe, dzidzo, hofisi, hotera, masisitimu eCASINO, maindasitiri & zvekushandisa zvekurapa uye varaidzo yekumba.
Isu tanga takazvipira makore kuongorora uye PC zvigadzirwa R&D uye hunyanzvi. Kuti tisangane nekusiyana kwevatengi vedu uye zvido zvevanhu, isu tinogara tichichengetedza hukama hwepedyo nekuchinjana kwehunyanzvi neketani yedu yepamusoro yekutengesa, senge maLCD epaneru vatengesi veSAMSUNG, AUO neBOE, CPU mutengesi weIntel. Zvichakadaro, isu tinoshanda nemazvo nevose vedu veedu ThinkView vamiririri uye mamwe akawanda makuru mabhurani semuenzaniso, ViewSonic, ZTE, GreatWall, Hedy, Haier.
Ma monitors edu uye ese ari muPC imwe atengeswa zvakanaka mumisika yepamba neyekunze senge, USA, Canada, Russia Vietnam neSouth America nyika. Maererano nemitemo yekushandira pamwe uye mabhenefiti, tinogamuchira vatengi kubva pasirese uye isu tinopa nemoyo wese zvigadzirwa zvakanaka uye sevhisi pamutengo wakanakisa.